लकडाउनमा थन्काइएका मोटरसाइकल चलाउनु अघि यी ४ कुरा चेक गर्नुस्
9:09 am, सोमबार, वैशाख २९, २०७७
काठमाडौं । विश्व नै आक्रान्त बनाएको कोभिड १९ (कोरोना) भाइरसका कारण नेपाल लगभग ४६ दिनदेखि लकडाउनमा रहेको छ । हिजो आइतबारदेखि लकडाउनको मोडालिटीमा केही परिर्वतन भएको छ । र, सडकमा बाक्लोरुपमा सवारीसाधन गुड्न थालेका छन् ।
सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्था, वर्कशप तथा पार्टस पसल, कर्पोरेट क्षेत्र तथा अत्यावश्क क्षेत्रलाई टाइम कार्ड लागु गरेर आवत जावत गर्न अनुमति दिएको छ । यस्तोमा धेरैको सावारीसाधन लामो समयसम्म घरमा थन्क्याइएको छ । यसरी पार्किङ गरेर राखेको मोटरसाइकल लिएर हिड्नुभन्दा अगाडि मोटरसाइकल राम्रोसँग चेक गर्नु पर्छ ।
लामो समयसम्म संचालनमा नआएका मोटरसाइकल सडकमा लिएर हिड्नुअघि निम्न कुरा राम्रोसँग चेक गरेर मात्र निस्कनु राम्रो हुन्छ ।
१. इन्जिन आयल
यसरी लामो समयसम्म संचालनमा नआएको मोटरसाइकल लिएर निस्कनु अगाडि इन्जिन आयल चेक गर्नु पर्छ । इन्जिन आयल आफैले सहजै चेक गर्न पनि सकिन्छ । इन्जिन आयलको अबस्था हेरेर चेन्ज गर्नु पर्ने भए सके आफैँले वा नसके वर्कशप लगेर चेन्ज गर्नु पर्छ ।
मोटरसाइकलको मुख्य सुरक्षा फिचर भनेको ब्रेकिङ सिस्टम नै हो । लामो समयसम्म संचालनमा नआएको मोटरसाइकलको ब्रेक जाम भए नभएको एकिन गर्नु पर्छ । आजकल उपलब्ध मोटरसाइकलमा हुने डिस्क ब्रेक अझै जाम हुने सम्भावना रह्न्छ । यसरी लामो समयसम्म बन्द भएको मोटरसाइकल लिएर निस्कनु भन्दा अगाडि चेक गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
मोटरसाइकल लिएर निस्कनु भन्दा पहिला इन्धनको अबस्था बुझ्न जरुरी हुन्छ । हालको अबस्थामा केही पेट्रोल पम्पहरु संचालनमा आइसकेका छैनन् । यस्तो अबस्थामा आफ्नो मोटरसाइकलमा इन्धनको अबस्था बुझेरमात्र लिएर निस्कनु राम्रो हुन्छ ।
४. थ्रोटल वायर/इन्धन सप्लाई
लामो समयसम्म नचलाइएको मोटरसाइकलमा थ्रोटल वायरले राम्रो रेस्पोन्स गर्नन् सक्छ । यस्तो हुँदा इन्जिनमा इन्धनको सप्लाइ राम्रो नहुने हुन्छ । यसले गर्दा मोटरसाइकलले पावर तथा पिकअप नलिने हुन्छ । यसकारण मोटरसाइकल लिएर निस्कुन अगाडि थ्रोटल वायरले राम्रो काम गरे नगरेको हेरेरमात्र निस्कनु पर्छ ।
अर्थमन्त्रीलाई गिज्याउदै सामाजिक सञ्जाल, बिद्युतीय गाडीबारे कसले के लेखे
एउटै इलेक्ट्रीक कारमा २ करोड मूल्य बढ्ने, मोटर क्षमता अनुसार फरक अन्तःशुल्क
सवारीसाधन आयात सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन, चलखल बढ्ने खतरा
मोटरसाइकलमा बजेटको कस्तो प्रभाव, मूल्य नबढ्ने
इलेक्ट्रीक कारको मूल्यमा व्यापक वृद्धि
मोटरसाइकलमा कुन शिर्षकमा कति लाग्छ कर, यस्तो छ व्यवस्था
हतारमा नयाँ मोटरसाइकल किन्नु अघि विचार गर्नुस् यी कुरा
मोटरसाइकल सर्भिसिङ गर्दा यी ५ कुरा ठिक गर्नुस्
यी हुन् ‘लङ ड्राइभ’मा निस्कदा साथमा बोक्नु पर्ने सामान
उत्कृष्ट सेकेन्डह्याण्ड कार छनोट गर्ने ५ तरिका
हिरोले दियो लकडाउनमा मोटरसाइकल सुरक्षीत राख्ने टिप्स, गर्नुस् यी ७ काम